အမေ့အိမ်: Install Windows XP using USB Flash Disk/ Flash Drive
Install Windows XP using USB Flash Disk/ Flash Drive
ကိုရဲသွေးနီ ရေ မူရင်းဆိုဒ်က ပို့စ်လေးအတိုင်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား...
အင်စတော လုပ်ရတာအဆင်မပြေရင် မေးလ်ပို့ပေးပါ..
Someone in this post (Acer Aspire One Specifications and Windows XP Drivers) ask me to writeatutorial about how to install Windows XP using USB flash disk/flash drive.
If you want to install Windows XP, but your notebook (or PC) has no CDROM, you should install Windows XP using USB Flash disk/Flash Drive/Thumb drive...
so, now you have2computers, with CD-ROM support and without CD-ROM support (e.g Acer Aspire One, Asus EEE-PC).
Locate folder C:\_Komku\_PeToUSB\_
Drive Label : XP-KOMKU (or whatever you want)
On Command Prompt window, go to directory C:\_Komku\_bootsect\_
then type cd komku\_bootsect and press Enter
Remember, you can use this tutorial to install Windows XP on all other computers.. not just Aspire One and Asus EEE-PC....
ရေးသားသူ © အမေ့အိမ်အဖွဲ့ KING at 7:56 AM
ကာတွန်း ATH ရဲ့ စိုက်ကြပြန်ပြီ … - ကာတွန်း ATH ရဲ့ စိုက်ကြပြန်ပြီ … (မိုးမခ) ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၈
ငခူရအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ် လူသတ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ဦးအောင်ဇော်ဝင်း (ခ) ဇော်ကီးအာမတ် တရားရှင်လွတ်မြောက် - နိရဉ္စရာ၊ ဇွန် ၂၀ လူသတ်မှုစွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုခံရထားရသူ “ရှိုင်း” ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ဇော်ဝင်း(ခ)ဇော်ကီးအာမတ် (ဘ)နိုရာမောက် အား မောင်ေ...